IMelikey ithengisa iimveliso ezininzi ezenziwe ngesandla, ikakhulu ezenziwa ngomthi wendalo kunye nezinto zokutya zebanga lesilic. Ezi mveliso zenziwe zathomalalisa iintlungu zomntwana kwaye zihlafuna ukunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo.
Isongo: Isilondolozi sethu somlinganiso we-teether esine-silicone sinikezelwe ekusombululeni ingxaki yosana kunye nolutsha oluncinci, olusefashinini kwaye lukhuselekile. Njengesongo esenziwe ngamazinyo, isongo sethu sinokunciphisa iintlungu. Inceda ekunciphiseni iintsini zomntwana wakho, ukuvumela ukuba ulonwabele uncumo lwakhe oluhle ngakumbi.
Isacholo somqala: Amazinyo akumgangatho ophezulu okusila isacholo somjikelo wesandi sinceda umntwana ukuba adlule kumazinyo aqinileyo okusila ixesha. Ukuzonwabisa okuhle kwiintsana ngelixa uncancisa. Gcina ingqalelo yosana lwakho kude nemikrwelo kunye neenwele ezikhutshiweyo ngelixa uncancisa okanye uncancisa. Ukubonelela ngoxinzelelo lweentsini ezithambileyo zomntwana kwaye kunceda ekunciphiseni ukungabikho kwamazinyo. Kufanelekile ukuba oomama banxibe kwaye kukhuselekile kwiintsana ezihlafunwayo. Kuhlaziya ngakumbi kwaye kuyaphumla kunezinye iithoyi ze-molar.
Dlala iGym: Le ndawo yomthambo yomdlalo womntwana yindlela elungileyo yokukhuthaza ukukhula kweemvakalelo zomntwana kwaye inokunceda umntwana ukuba aphucule ulungelelwaniso lwamehlo kunye nezakhono zemoto. Into yokudlala yomntwana ejikelezayo yenziwe ngomgangatho ophezulu, uthambile kwaye ukhululekile ukubamba, izixhobo ezithambileyo ezinokwenza izandi, irusi kunye neentsimbi.
Wamkelekile ukuba wenze ubuchule bakho, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane iimveliso ezintle ezenziwe ngezandla
Umsebenzi wokuDlala komntwana Gym yendalo ye Beech Wooden Edu ...
Baby lwaba neengxakana Umgexo Teether Toy lehoseyile ...
Iinkathazo ezingenakunqandwa zamazinyo Chain Chewable Umgexo for Abantwana | ...
Abicah lwaba neengxakana Umgexo Baby Uhlafune Toys Manuf ...
abicah baby teether , teether kakhulu ngenyanga-4 ubudala , abicah teether , grade ukutya abicah amaso bulk, abicah lwaba neengxakana amaso , lwaba neengxakana yemvelo,